MyanmarBOC - Apps on Google Play
Myanmar Web StoreEducation
၁ - ပထမဦးဆုံး နှင့် တစ်ခုတည်းသော
ပထမဦးဆုံး နှင့်တစ်ခုတည်းသော မြန်မာဘာသာဖြင့် free online courses များကို သင်ကြားပေးသော videos များကိုစနစ်တကျ စုစည်းတင်ပြထားသည့် online education portal တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂ - ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာ
Myanmar BOC website မှာ free online courses များကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေး မည်သည့် deviceနှင့်မဆို ၀င်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Myanmar BOC တွင် networking အကြောင်းတို့ကို basic မှစ၍ လေ့လာနိုင်သည်။ Duwun သတင်းမီဒီယာများ၊ General Knowledge တွင် facebook အကြောင်း၊ computer အကြောင်း၊ photoshop ဖြင့် logo ဆွဲနည်းများ၊ powerpoint၊ gmail account, paypal account ဖွင့်နည်းများ၊ seo (search engine optimization)၊ internet အကြောင်း တို့ကို စုစည်းတင်ပြထားသည်။ Computer Basic တွင် window install, driver install လုပ်နည်းများ၊ computer virus အကြောင်းများ၊ disk lock ပြုလုပ်နည်းများ၊ microsoft excel,word, photoshop, videoediting, autocad, linux os, နိုင်ငံခြားဘာသာစကားများ၊ Programming languages တုိ့ကို Myanmar BOC တွင် စုစည်းပေးထားသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှလေ့လာလိုသူတွေ ပညာရေးကဏ္ဍပိုမိုမြင့်မားအောင် နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများထံမှ တိုက်ရိုက် နည်းစနစ်ကျကျ သင်ကြားနိုင်အောင် Myanmar BOC မှ online learning marketplace တစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
1 - the first and only
The first and the only languages ​​for free online courses, training videos, which you organize submits an online education portal.
2 - any time any place
Myanmar BOC website for free online courses anytime, anywhere, anytime, with any device to learn 0.
Myanmar BOC about networking and to learn from the basic. Duwun media General Knowledge about facebook computer photoshop logo projection, powerpoint, Ways to open gmail account, paypal account, seo (search engine optimization), presented to organize the internet. Computer Basic window installation, driver installation practices, More about the computer virus, How to disk lock, microsoft excel, word, photoshop, videoediting, autocad, linux os, foreign languages, Programming languages ​​gives usacollection of Myanmar BOC.
The main objective of higher education who studied Myanmar and experts to teach techniques and move directly from the Myanmar BOC as an online learning marketplace will contribute.
Added bottom navigation.
More by Myanmar Web Store
Take care of eye problems to prevent blindness and to stop disabilities